Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ na Beljọm Jeremy Doku Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Akwụkwọ akụkọ Jeremy Doku anyị na-agwa gị Eziokwu gbasara akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, ndị nne na nna, ezinaụlọ, enyi nwanyị / nwunye ka ọ bụrụ, Ndụ Onwe, Ndụ na Net Worth.
Na nkenke, anyị na-enye gị akụkọ ndụ zuru ezu nke ọkachamara n'ịgba ọsọ nke agbụrụ Ghanian. Versiondị anyị nke njem Jeremy Doku malitere n'oge ọ dị obere mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama na egwuregwu ahụ.
Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ gbasara ndụ gị dị na ụdị nke Jeremy Doku's Biography, anyị na -ewetara gị oge ọ bụ nwata iji bulie ebe ngosi. Obi abụọ adịghị ya, ọ na -achịkọta akụkọ ndụ ya.
Jeremy Doku Biography - Lee mmalite ndụ ya na mbili.
Ee, mụ na gị maara na ọ bụ otu ụdị Kylian Mbappe na Alphonso Davies - na usoro nke ọsọ. Anyị na-amasị Jeremy maka ọtụtụ ọsọ ọsọ ya, osooso, ịdị gara gara, nguzozi ya na ụdị dribbling ya.
N'agbanyeghị nkwanye ugwu, naanị ole na ole n'ime ndị egwu ya agụọla isiokwu dị nkenke gbasara akụkọ ndụ Jeremy Doku. Anyị kwadebere ya, maka ịhụnanya Belgium na bọọlụ. Ugbu a, n'atụghị egwu, ka anyị bido.
Jeremy Doku Nwatakiri Akụkọ nke:
Maka ndị na-ebido Biography, onye Belgium na-aza aha ahụ - Eden Hazard ọhụrụ. A mụrụ Jérémy Doku na 27th nke May 2002 nne ya, Belinda Doku na nna, David Doku, na Antwerp, Belgium.
Lee ihe ndapụta !! Onye amụrụ ama ama ama ama ama ama ama ama ama ụbọchị anọ tupu mmalite nke 2002 World Cup na Japan na South Korea.
Banyere ọnọdụ ya n'ime ezinụlọ, Jeremy bụ nwa nke abụọ na nwa nwoke n'ime ụmụ anọ nne na nna ya - David na Belinda. Ma papa m ma mama m alụọla ọmarịcha afọ.
Zute ndị nne na nna Jeremy Doku - Mr na Mrs David na Belinda Doku. Ha abụọ dakọtara.
Jérémy Doku toro na Borgerhout, na mpụga Antwerp, Belgium. Onye na -agba bọọlụ nọrọ ọtụtụ afọ ọ joyụ ya n'oge ọ bụ nwata na nwanne ya nwoke nke okenye, onye na -akpọ Jefferson Doku.
N'ikwu nke a, ndị na-agba ọsọ Belgium na-etolite na ụmụnne nwanyị abụọ ndị tọrọ, bụ ndị mekwara ka mmalite nwata ya. Childhoodmụaka bụ ihe dịịrị Jeremy Doku na ụmụnne ya eluigwe.
Laa azụ n'oge ahụ, nne na nna Jeremy Doku bi na mbara ihu nke bụ Halfway n'etiti zoo na ámá egwuregwu Bosuil.
Ebe egwuregwu a bụ ogige egwuregwu Royal Antwerp, klọb bọọlụ Belgium nke dị na Antwerp. Ọ bụrụ na ịmaghị, ọ bụ naanị nkeji isii site na ebe ezinụlọ ya bi.
Jerelọ ezinaụlọ Jeremy Doku bụụrụ nkume tụbara Bosuilstadion, ama egwuregwu dị na Royal Antwerp.
Na -ekpe ikpe ebe nne na nna Jeremy Doku zụlitere ya na ụmụnne ya, ị ga -ahụ mmekorita na ọdịnihu ya.
O toro na ala bọọlụ Bosuilstadion kpaliri agụụ ya maka egwuregwu mara mma.
You maara?… N'ụlọ ezinaụlọ ya, Jeremy nụrụ mkpọtụ ndị Fans Royal Antwerp na-eti site na ama egwuregwu ha.
N'ebe di nso na nso nso nke Bosuilstadion, ndi n'egwuregwu Belgian, nwekwara ncheta obi uto nke ZOO Antwerpen, ebe ya, Jefferson na umu nne ya nwanyi abuo gara leta dika umuaka. N'ezie, football, na mgbakwunye na nke a, mere ka nwata ya zuru ezu.
Jeremy Doku Ezigbo Ezinụlọ:
Ọ nwere ike ịmasị gị ịmara na onye Belgium si n'ezinụlọ egwuregwu. Dabere na Pịa Reader, ọsọ na-agba ọsọ ezinụlọ Jeremy Doku. Papa ya nwere ọtụtụ n'ime ya ma bụrụbu onye egwuregwu bọọlụ.
Inwe ọsọ n’ime ọbara ha anaghị akwụsị ebe ahụ. Ọbụna nwanne nwoke nke okenye Jeremy Jefferson nwekwara àgwà ahụ. Dị ka nwanne ya nwoke, ọ bụkwa ndị ịgba egwu.
Eziokwu ahụ bụ na ndị nne na nna Jeremy Doku nwere ike ịzụlite ya na ala ịta ahịhịa nke obodo nke abụọ kacha buo ibu na Belgium (Antwerp) na-egosi na ọ sitere n'ezinaụlọ mara mma.
Dị ka papa ya, David si kwuo, ebe ọ zụlitere Jefferson, Jeremy na ụmụ agbọghọ enweghị ezigbo aha. Akụkụ Antwerp metụtara oge kachasị na nsogbu ịda ogbenye, mpụ na ịzụ ahịa. Ka ọ na-agbakwunye okwu ya, nne Jeremy Doku (Belinda) kwuru otu oge;
N'ebe ahụ, ị ​​nwere ike izute ndị ọjọọ ngwa ngwa. Mmanya na-egbu egbu na ọgwụ ọjọọ na-eme ngwa ngwa, ụmụaka na-ejidekwa ma ọ bụrụ na ha akpacharaghị anya. Enwere m obi ụtọ dị ka ụmụ m nwoke abụọ hụrụ football n'anya.
Ezigbo ezinụlọ Jeremy Doku:
Na -ekpe ikpe site n'ọdịdị ya, ị nwere ike ịgwa onye Belgium nwere mgbọrọgwụ Afrịka. Agbanyeghị na amụrụ ya na ime obodo Antwerp, ezinụlọ Jeremy Doku sitere na ndị Ghana.
Ozugbo a na -akpọ Gold Coast, mba ahụ dị n'akụkụ Ọwara Guinea na Oke Osimiri Atlantic, na mpaghara mpaghara ọdịda anyanwụ Africa. Nke a bụ Ghana, ebe ezinụlọ Jeremy Doku nwere mgbọrọgwụ ha.
Kpọmkwem n'afọ 1993 yana n'ihi ịchọ inweta ndụ ka mma maka ụmụaka a na-amụbeghị amụ, papa Jeremy Doku (David) mere mkpebi na-agbanwe ndụ. O kwetara ịhapụ ezinụlọ ya na Ghana ka ọ rụọ ọrụ na Belgium.
Ya na nwunye ya (Belinda), David kwagara ma biri na Antwerp, na Northern nke Belgium. Afọ itoolu mgbe nke ahụ gasịrị, ha nwere Jeremy n'obodo ahụ. ,Mụnne nwanyị abụọ ndị nwanyị tọrọ ghọrọ ụmụnne Jeremy.
Jeremy Doku Mmụta:
Ndị Belgium na-agba ọsọ gafere ụlọ akwụkwọ praịmarị na ebe amụrụ ya, Antwerp. Ọbụna dị ka football mere ka ọ pụọ n'obodo ahụ, Jeremy gara n'ihu na-amụ akwụkwọ. N'ihi ndụmọdụ nne na nna ya, ọ gbasoro n'etiti ọrụ football ya na ịmụ akwụkwọ.
Nsonaazụ sitere na nyocha gosiri na ọ gara ụlọ akwụkwọ nbanye na Brussels - site na afọ 12. Jeremy Doku gafere ụlọ akwụkwọ ịbanye na Purple Talents nke Anderlecht.
Ụlọ akwụkwọ sekọndrị nyere ya ohere ịga klọb ọzụzụ n'etiti ehihie na abụọ tupu ya alaghachi n'ụlọ akwụkwọ.
Jeremy Doku Football Akụkọ nke:
Njem nke stardam malitere mgbe ọ dị afọ isii. N'afọ 2008, ndị mụrụ ya (David na Belinda) kpọọrọ nwa ha nwoke gaa Ekwensu nke KVC Olympic Deurne (otu obere ndị Belgium) maka ule.
Na nso ụlọ ezinụlọ ha, KVC Olympic Deurne dị naanị nkeji iri. N'ịbụ ọ householdụ nke ezinụlọ ya, Jeremy na-achọsi ike gabigara ọnwụnwa ahụ na agba agba.
Little Jeremy malitere ịkụ bọl na Ekwensu nke Olympic Deurne, ụlọ akwụkwọ mmuta nke mechara soro Tubantia Borgerhout bụ ndị ha na ha na-emekọ ihe ọnụ. Iji mepee ohere maka nnukwu ụlọ akwụkwọ, Jeremy Doku sonyeere ha.
Obere afọ nke igwu egwu na Tubantia Borgerhout, nwata ahụ malitere ịchọ nhọrọ ụzọ ọpụpụ. Nke a bụ n'ihi na klọb ahụ dabara na enweghị ego. Gbasochi azụmahịa nke Tubantia Borgerhout, Jeremy malitere ịchọ ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ kwụsiri ike.
The Beerschot AC Akụkọ:
N'agbanyeghị nke ahụ, n'ime obodo mgbago ugwu Belgium, Jeremy biri n'otu n'ime ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ kacha mma Antwerp. Biya. Beerschot AC dị naanị nkeji iri na asaa site na ụlọ ezinaụlọ ya na agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ ama ama maka ịhazi ndị na-eto eto ka ha bụrụ ndị ama ama.
You maara?… Klọb ndị Belgian nke dị na ndịda Antwerp maara na ha nwere ndị egwuregwu dịka; Toby Alderweireld, Mousa Dembélé, Radja Nainggolan, Jan Vertonghen na Victor Wanyama wdg
Mgbe ọ nọ na Beerschot, Jeremy malitere ịgbaso nzọụkwụ nke Radja Nainggolan onye o mere arụsị ya. Ọ bụ ruo mgbe Beerschot ka ọ bịara pụta ìhè ụdị talent ọ bụ, nna ya, David Doku kwuru.
N'ime otu afọ isonyere, Jeremy onye yiri ka ọ bụ onye isi ndị otu ya, nyeere ndị otu ya aka imeri iko ntorobịa a ma ama.
Jeremy Doku Biography - tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Mgbe nwata ahụ meriri Beerschot iko ahụ, o doro anya na ọ nwere atụmanya nke ịbụ onye ọkpụkpọ mba.
N'ịghọta ịdị mma ya, ọtụtụ nnukwu klọb na mba ahụ malitere ịchọ ime ka ndị mụrụ ya kwenye ka nwa ha debanye aha ha n'akwụkwọ.
N'afọ 2012, mgbe ọ dị afọ 10, RSC Anderlecht ghọrọ ndị nwere ihu ọma bịanyere aka na Jeremy. Na-eche na ọ ka na-agụ akwụkwọ, klọb ahụ nyere ya ohere agụmakwụkwọ n'ụlọ ọrụ mbata ha aha ya Anderlecht's Purple Talents ụlọ akwụkwọ.
Na nke mbụ, Jeremy Doku hapụrụ ezinụlọ ya na Antwerp, na-eme njem ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50km, ndịda Belgium iji rara onwe ya nye na gburugburu ọhụụ ya. Dịka anyị kwuru na mbụ, ụlọ ọrụ ahụ lekọtara agụmakwụkwọ ụlọ akwụkwọ sekọndrị ya.
Ndụ na Anderlecht:
N'ụlọ ọhụrụ ya, Jeremy hụrụ ọtụtụ ndị egwuregwu dị mma. N'etiti ha, o nwere àgwà ka mma n'ihi ịba ụba na ọsọ ya. Na ọ na-amasị Stéphane Stassin, onye na-azụ ya si U12.
N'ihi ọchịchọ ọ na -achọ ịgụcha ụlọ akwụkwọ sekọndrị, ọzụzụ amachaghị. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ rụrụ nke ọma n'oge egwuregwu. Ụdị dị otú a mere ka ọ kpọọ oku na otu ndị ntorobịa Belgium U15. Ka ọ na -aga n'ihu n'ọkwa klọb, otu a ka ọ mere na ọkwa ntorobịa nke mba.
Arghọ Onye mpako:
Ka ọ na -eru nso na njedebe nke afọ iri na ụma ya, Jeremy Doku zụlitere agwa dị iche na pitch.
O nwetara aha otutu “Onye Nganga na Eze nke Dribbles”N'ihi ụzọ o si tinye ụkwụ ya na bọl ma chere ka usoro mmegide bịakwute ya. Mgbe ha na-abịa, ọ dribbled ha ma tinye ụkwụ ya na bọl.
Kama ịga ihe mgbaru ọsọ, Jeremy Doku nọgidere na -etinye ụkwụ ya na bọọlụ, na -eche ndị iro ya ka ha laghachite.
Onye nkuzi ntorobịa Stéphane Stassin were ya iwe wee gwa ya ka ọ gaa akara ihe mgbaru ọsọ. Ọbụna ndị otu Jeremy nwetara obere bọọlụ n'ihi na ọ na -anọ ya mgbe niile, na -emechu ndị mmegide ya ihu.
Mgbe Jeremy Doku gụchara ọzụzụ, ọ na -edozi ngwa ngwa n'ihi na o nwere nkeji iri iri iri nri, ịsa ahụ wee laghachi ụlọ akwụkwọ.
Otu ụbọchị, Jeremy jidesiri bọọlụ ike wee kpọọ onye nkuzi ya ka ọ dribie ya - nke o mere n'ụdị ọhụrụ. Ka ọ na -ekele ya maka ịrụsi ọrụ ike ya, Stéphane Stassin nyere Jeremy otu ndụmọdụ;
Jeremy, ọ bụrụ na ịchọrọ igwu egwu na nnukwu klọb, ị ga-eme ihe ọzọ karịa ịba mba.
Ndụmọdụ ahụ batara n'ime obi ya ka ọ laghachiri ịrụ ọrụ karịa na njem ya ma na-enyere aka. Jeremy jigidere egwuregwu ya dị ka onye ọkpụkpọ kachasị mkpa na otu ọgbọ maka Anderlecht.
Mgbe ọ dị afọ 15, ọ malitere ịnyefe onyinye. Ọ nwere nhọrọ n'etiti 5 - 6 nke klọb kasịnụ na Europe. Arsenal, Chelsea, klọb ndị Dutch mana Liverpool kacha chọọ ya. Ndị Reds rụpụtara Doku aka na mmalite nke oge 2017/2018.
Na Jenụwarị 2017, Liverpool kpọrọ ndị nne na nna Jeremy Doku tinyere ya onwe ya ileta ụlọ ọrụ ha Steven Gerrard na Jürgen Klopp. Clublọ ọrụ England kọwaara ya ọrụ ha - na ọ ga-abụ onye ga-anọchi ya ogologo oge Sadio Mané.
Gwa eziokwu, David na Belinda Doku (nna ya na nne ya) duhiere ọ bụghị naanị site na egwuregwu egwuregwu Liverpool kama nchekwa ego.
Obere mkparị na-egbu ọkụ (Jeremy) ebupụlarị site na mkparịta ụka dị ụtọ nke Liverpool.
Anderlecht achọghị ka onye ọkpụkpọ ha kacha mma dị ọnụ ala na Liverpool. N'ihi egwu ịtụfu ya, klọb ahụ gakwuuru otu n'ime ndị dike ha gara aga - onye Romelu Lukaku.
N'ihi nnukwu nkwanye ugwu Jeremy nwere n'ebe ọ nọ, a na -ewere Big Belgium ka ọ bụ naanị onye nwere ike ime ka Jeremy Doku nọrọ.
You maara?… Klọb ahụ mere ndokwa n'etiti Lukaku na Jeremy ebe ha abụọ kwuru okwu site na oku vidiyo. Na nzukọ ahụ onye amaala onye Belgium ahụ kwuru;
Ndewo Jérémy, Abụ m Romelu. Dị ka gị, egwuru m egwu na Anderlecht ruo ọtụtụ afọ. Ọ bụrụ na m ga - enye gị ndụmọdụ dị mma, ekwenyere m na ị ga - anọnyere ọgbakọ a, ọ dịkarịa ala nweta ngụsị akwụkwọ na agụmakwụkwọ football.
ekele, Steven Gerrard, Ekele Jürgen Klopp, mana enweghị ekele maka inwe m. Jeremy gbasoro ndụmọdụ Lukaku n'agbanyeghị ọnụ ọgụgụ kpakpando nke Liverpool kwere nkwa ya.
Ọ bụụrụ Anderlecht nnukwu ahụ efe nke na -ahụzịghị ya ka ọ na -amịgharị site na mkpịsị aka ha.
N'ịbụ ọ theụ nke ezinụlọ ya na klọb ya, Jeremy Doku bịanyere aka na nkwekọrịta ọkachamara ya na mmalite nke oge 2018/2019. You hụrụ foto arụsị ya (Lukaku) n'azụ ya?
Jeremy Doku Bio - Akụkọ nke :ga nke Ọma:
Obi dị anyị ezigbo ụtọ mgbe ọ kpebiri ịnọrọ na Anderlecht kwuru nna ya David. Oge gara aga siri ike nye ezinụlọ n'ihi na enwere mmasị dị ukwuu na ya. Ebumnuche Jeremy bụ ihe ịga nke ọma na Anderlecht.
N'oge Doku binyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta ya, ụlọ akwụkwọ sekọndrị agaala. Ndụ mgbe nke ahụ mechara hụ ya na -etinye uche ya niile na ọzụzụ.
N'oge na -adịghị anya, onye ọ bụla malitere ikwu maka ya, na -asị na ọ bụ ọdịnihu Belgium. Na ọ ga -agbawa.
Naanị akara ngosi klọb dịka Romelu Lukaku (afọ 16 ụbọchị 11), Ndị Tieleman gị (16 afọ iri asatọ na asatọ) na ndị ọzọ dị tupu.
Jeremy enweghị nsogbu isonye na ndị otu mbụ n'ihi na ọ dịlarị njikere n'anụ ahụ na n'egwuregwu imere onwe ya aha.
Dị ka a hụrụ na vidiyo ahụ, onye nọ n'afọ iri na ụma nwere ike ịsọ mpi na ndị okenye na mgbe ọ bụla jiri bọọlụ gbaa egwu, onye ọ bụla maara na ọ ga -eme ihe pụrụ iche.
N'oge na-adịghị anya ọ malitere ịhụ Njikọ Belgian dị ka ọ dị obere. Nke a bịara n'otu oge ọtụtụ nnukwu klọb gburugburu Europe gara ikpere maka mbinye aka ya.
Ihe ịga nke ọma na France na National Team:
N'ikpeazụ, Royal Sporting Club Anderlecht - dịka ha na -akpọ ha - nwetara ihe ha chọrọ. Ebumnuche ha bụ ịhụ ka ọnụ ahịa kpakpando ha bilitere ka ha nwee ike nyefe ego.
Na 5th nke Ọktoba 2020, Doku bịanyere aka na Rennes maka nde euro 26. Ọ banyere n'otu n'ime ọgbakọ kachasị n'ụwa.
Site na mgbe ọ bịarutere Stade Rennais Football Club, ikike nke ịga n'ihu enwewo ọganihu site n'ike ruo n'ike. Egwuru egwu tinyere aha ndi di ka Steven Nzonzi na Eduardo Camavinga emeputala ihe kacha mma na Jeremy Doku.
Nnukwu ịrị elu na klọb klọb dugara na oge ezinụlọ ya niile chere. Doku kpọrọ ndị otu mba Belgium oku na 5th nke Septemba 2020.
Ụbọchị atọ ka mpụtara mba mbụ ya, ọ gbara ihe mgbaru ọsọ mbụ ya maka Belgium na UEFA Nations League.
Onye na -eto eto gara n'ihu na -akwalite CV ya ka ọ na -agbakwunye ọtụtụ arụmọrụ na -akpali akpali nke a chịkọtara na vidiyo dị n'okpuru.
N'ime oge a, ọ nweghị ihe Jeremy na -enweghị ike iji bọọlụ mee. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, enweghị ike ịkụzi ụdị flair ya.
O so na Belgium Goal Trashing nke Belarus:
Mmalite nke 2021 hụrụ Jeremy Doku na -aga n'ihu ịrị elu meteoric ya na agba mba.
N'ime asọmpi iru eru nke iko mba ụwa nke 2022, nugget n'akụkụ Michy Batshuayi, Leandro Trossard, Dennis Praet, Christian Benteke jikọtara ihe mkpofu Belarus 8 ihe efu.
Lelee vidiyo vidiyo nke Belgium na-egwepị Belarus 8-0 ya na Jérémy Doku nke sitere n'ike mmụọ nsọ.
Obi abụọ adịghị ya, ụwa na-achọ ịhụ Jeremy Doku ka ọ na-eto ka ọ banye n'ọkwa klaasị nke ụwa, n'ihu anya anyị.
A na -akpọ 5 ụkwụ 7 Speed ​​Dribbler dị ka nke kachasị mma n'etiti ahịrị mmepụta na -adịghị agwụ agwụ nke Right Wingers na -apụta na Belgium. Ndị ọzọ, dị ka anyị na -ekwu maka Bio ya, bụ akụkọ ugbu a.
Onye bu Nwanyi ma obu nwunye Jeremy Doku bu:
Maka inwe ihe ịga nke ọma na ibili na nnukwu ihe klọb na bọọlụ mba chọrọ, ọ bụ ihe dị mma ka ndị egwu tụgharịa uche n'okwu.
Na n'azụ onye egwuregwu ọ bụla na -aga nke ọma, ekwesịrị inwe enyi nwanyị ma ọ bụ WAG. Maka nke a, Lifebogger ekpebiela ime nyocha iji chọpụta onye Jeremy Doku na -akpa.
Nke mbụ, ịgọnarị eziokwu na ọmarịcha mma nke Jeremy agaghị adọta ụmụ nwanyị nwere ike ịpụta onwe ha dị ka ndị nwere ike ịlụ nwanyị, enyi nwanyị na nne na -achọ nwa ya.
Dabere na blọọgụ Football-Ghana, otu n'ime nne na nna Jeremy Doku-ọkachasị nna ya (David)-gosipụtara na nwa ya nwoke enweghị enyi nwanyị dịka Mee 2020. Nke a bụ tupu Ọktoba 2020 ya kwaga Rennes.
Agbanyeghị, n'oge a na -etinye Bio a, anyị ji n'aka na ọ naghị awagharị naanị ya n'isi obodo Brittany, northwest France.
N'ihi ya, enwere ike ịbụ onye egwuregwu bọọlụ bụrụ mmekọrịta nzuzo, nke ahụ ekwesịghị ịbụ nke ọha, opekata mpe ugbu a.
Jeremy Doku Ndụ Nke Onwe:
Nke mbụ, ọ bụ nwata nwoke dị jụụ nke na-ahọrọ iji ụkwụ ya ekwu okwu. Gi adighi adi mfe ighota ya. Nke a bụ n'ihi na ị maghị mmetụta Jeremy na-enwe site n'ọdịdị ihu ya.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, Jeremy Doku bụ nwata dị umeala n'obi, nwere àgwà a ghọtahiere. Otu isi ihe. Ọ dịghị mpako ma ọlị. Jeremy bụ nwata na -eto eto, onye ekwesighi ịhụ ya dị ka onye ọbịa.
Gị àgwà ya na -eme ya ụdị okwu dị mgbagwoju anya. Nke kacha mma na ntughari Jeremy Doku nke gbochiri ya ịga bụ;
Nnukwu nrọ, atụla egwu ihe ọ bụla na-enyere aka imeri n'ọsọ nke ndụ.
Ihe mbụ ịmara banyere ndị ọgba bọọlụ bụ na ọ dị ka nwoke nkịtị nke gbachiri nkịtị. Jeremy anaghị etinye aka na onwe ya nakwa na ị gaghị ahụ ya na ndị enyi ya ọkachasị n'ụlọ ya.
Site na football, nna ya (David) kwuru na nwa ya nwoke nwere ike ịnọ n'ụlọ ya ụbọchị niile. Ọzọkwa, Jeremy hụrụ n'anya ịnọ gburugburu ihe njikwa ya. N'ihe gbasara egwuregwu, ọ na-egosi osisi na PES kama FIFA.
Jeremy Doku Web site Web:
Na ngalaba nke bu ụzọ, anyị mụtara na onye Belgium na -agba ọsọ bụ naanị ya. Omume Jeremy Doku dị mfe.
Ọ bụ onye na -anaghị achọ ma ọ naghị esiri ike itinye aka na mmekọrịta ndị mmadụ. Ugbu a na ngalaba a, anyị na -agwa gị otu o si emefu ego ya.
Jeremy Doku Ụgbọ ala:
Ee, ọ bụ onye hụrụ moto n'anya. Onye egwuregwu bọọlụ nwere mmasị ịnweta ụgbọ ala dabara na agba ya. Onye Belgium bulitere ụgbọ ala a ozugbo iji mee ka ndị na -ege ntị hụ nchịkọta ọhụrụ ya.
Jeremy Doku anaghị anya ụgbọ ala pụrụ iche ma ọ bụ na -egbu maramara kama ọ bụ nke kwekọrọ n'ụdị ịdị umeala n'obi ya.
You wgwọ ọrụ Jeremy Doku ezuola ịzụta ụdị ụgbọ ala a. A na-ese ya na ndị otu ya na ihe anyị na-ezo aka na ngosipụta moto site n'aka ndị ọrụ klọb ya. Na nchịkọta, nwa anyị nwoke nwere ezi uche nke na-ebi ndụ dị ala.
Ndụ Jeremy Doku:
Maka nwa amaala Borgerhout, ịchụ nne ya (Belinda) na nna ya (David) mere ya bụ otu n'ime ngọzi kasịnụ nke ndụ ya.
N'ezie, ọ nweghị ụgwọ ọrụ Rennes ọ bụla nwere ike iwepụ ịhụnanya o nwere maka nne na nna ya na nwanne ya nke a na -ese na -eme ememe otu n'ime ihe ndị ọ rụzuru.
N'ime ngalaba ndụ ezinụlọ anyị, anyị ga-agwa gị karịa gbasara ndị ezinụlọ ya bido n'isi ụlọ.
Banyere Jeremy Doku Nna:
Ọ bụ nwoke maara nka nke inwe ezi amụma maka nwa ya nwoke. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmetụta niile David nwere gbasara Jeremy aghọọla eziokwu.
Site na ịkọ ụbọchị mgbe ọ ga -eme mpụta mbụ ya na akụkụ ndị ọzọ nke ihe ịga nke ọma ya. Ị na -ahụ okwu a nke nwoke dị oke ndụ, ọ bụ nnukwu onye nchụàjà nwa ya na onye na -akwado ihe ịga nke ọma ya.
Banyere Jeremy Doku Nne:
Speed ​​Dribbler na -achọ ịbịanye aka na nkwekọrịta nkwekọrịta nke ga -ahụ ka ọ na -eme ọtụtụ ego na ọrụ ya.
Ị maara?… Naanị otu nwanyị na -agwa ya mgbe niile banyere ihe egwu dị na ịhọrọ ego tupu ọdịmma ya. Ọ bụghị onye ọzọ karịa nne ya, Belinda Doku.
Mgbe Jurgen Klopp Liverpool duhiere ya, Jeremy mgbe ọ natara ozi banyere nnukwu ego Liverpool kwere nkwa inye ya, gbara ọsọ gaa nne ya wee tie mkpu;
Mama, mum…, nke ahụ bụ ya, n'ikpeazụ, ezinụlọ anyị ga-abụ ọgaranya!
N'ezie, jacuzzi dị na ebe ọzụzụ Liverpool nwere mmasị Jeremy nke ukwuu - nke bụ ihe ọ hụbebeghị.
Dị ka a tụrụ anya ya, Belinda kwesịrị ime ka obi dajụọ ya, na -eme ka ọ ghọta mkpa ọ dị ịnọgide na RSC Anderlecht ruo mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ na football.
Banyere Jefferson, Nwanna Jeremy Doku:
Ozugbo ọ bụ onye egwuregwu na -achọsi ike, ọ bụ ya gosipụtara obere nwanne ya ụzọ ịgba bọl. Ị maara?… Jefferson dịkwa ọsọ ọsọ dịka Jeremy.
Nke a pụtara na ọsọ na -agba n'ime ezinụlọ. Na -egbochi ịdị ngwa ngwa, ọ bụghị naanị nwanne nwanne ya. Anyị nwere ihe akaebe nke ahụ.
Dị ka Jeremy, Jefferson na Anderlecht na-egwuri egwu - mana ọ nweghị ihe ịga nke ọma. Dabere na nna ya David, ọkpara ya nọrọ ogologo oge na-enweghị ezigbo klọb na-akpọ maka ọrụ ya. N'ihi nke a, ọ hapụrụ nrọ ya iji jikwaa nwanne ya nwoke.
Nke a bụ ihe mere Jefferson ji jiri obi ike mee mkpebi ahụ. Ihe dị ka Ọktoba 2020 mgbe Jeremy zigara Rennes, onye egwuregwu bọọlụ 18 gbara afọ, mgbe ọ hapụrụ ezinụlọ ya na-atụ egwu na ọ ga-abụ ezigbo ụlọ.
N'ezie, ọ naghị adịrị onye dị afọ iri na ụma dịka Jeremy ịhapụ obodo ya ka ọ gbaa bọọlụ ukwu na France. Maka onye dị ka ya onwe ya, ọ ga -abụ nke kacha sie ike.
Na ọkwa nkeonwe, onye ọ bụla nọ n'ezinụlọ Jeremy Doku na -atụ egwu na ndụ ya ga -emetụta ya nke ukwuu.
Na N'ajụjụ ọnụ Het Ọkachamara Nieuws, akwụkwọ akụkọ Dutch nke dabeere na Antwerp, Belgium, Jefferson kwuru otu oge;
Mama m kacha atụ egwu. Ama m na ọ ga-esiri ya ike ịhụ Jeremy ka ọ nọ naanị ya. Maka nke a, adị m njikere ime nke ahụ - hapụ ọrụ m maka nwanne m nwoke.
Nke ahụ bụ ya. Jefferson hapụrụ ihe niile. O jidere ndụ ya n'onwe ya iji nyere nwanne ya nwoke aka ibi nrọ ya. Ọ bụ karịa nwanne, ma a ezi enyi.
Eziokwu Jeremy Doku:
Eziokwu # 1 - Ọ na - akpọ ọtụtụ egwu n'ụlọ akwa ahụ:
Onye ọ bụla maara na ọ bụ onye nwere uche nke na -anaghị egosipụta mmetụta ya ma kpọọ asị na -enwe ezigbo ndị enyi.
Otú ọ dị, anyị chọtara ihe dị iche na ọdịdị ya. Ị maara?…
Oge ọ bụla ọ bịarutere ime ụlọ mkpuchi wee hụ na ikuku adịghị mma, ọ na-eme ihe iji bulie ọnọdụ nke ndị ọrụ ibe ya. Dị ka enyi ya si kwuo, Marco Kana;
Jeremy ga-etinye egwu na egwu n'etiti mmadụ niile. Na njedebe, ime ụlọ mkpuchi ahụ dum ga-eso ya na ikuku ahụ wee dị ọkụ. Obi dị m ụtọ inwe ụdị agwa a.
Eziokwu # 2 - Kdị egwu ya:
N'ụlọ akwụkwọ mgbasa ozi Jeremy Doku, ị nwere ike ịchọta ntakịrị ihe niile. Ha gụnyere R'n'b, Dutch rap (ọ bụghị nke Depf Depad na Memphis na Promin Quincy) na egwu Afro - nke metụtara agbụrụ Ghanian ya.
Obi abụọ adịghị ya, Egwu bụ mmanya na -ejupụta iko juu Jeremy Doku.
Eziokwu # 3 - Jeremy Doku Rennes Salary Breakdown and Comparons:
Enweta ego nke Jérémy Doku Rennes na Euro (€)
Kwa Afọ: € 2,083,200
Ọnwa kwa: € 173,600
Kwa Izu: € 40,000
Kwa :bọchị: € 5,714
Oge Awa ọ bụla: € 238
Nkeji ọ bụla: € 4
Sekọnd ọ bụla: € 0.07
Kemgbe ị malitere ile Jeremy Doku'Bio, nke a bụ ihe ọ rụpụtara na Rennes.
Ebe Jeremy si abịa, nkezi onye Belgium na-enweta 26,000 EUR kwa afọ ga-arụ ọrụ maka afọ 6 na ọnwa 6 iji rite ihe ọ na-ewe n'ụlọ n'otu ọnwa.
Eziokwu # 4 - Jeremy Doku Speed ​​Eziokwu:
Ọ bụrụ na ị bụ onye hụrụ mode ọrụ n'anya nke na-amasị ndị egwuregwu na-eto ngwa ngwa, a na m adụ gị ọdụ ka ị debanye aha Jeremy. N'oge edere akụkọ ndụ ya, ihe ịtụnanya ahụ nwere ngwa ngwa 94, ọsọ 90, ike 95 yana ọkwa nwere ike ịdị 86.
N'ezie, anyị na -ahụ ya dịka otu n'ime ndị na -eto eto kacha mma n'ụwa na FIFA.
Lifebogger abanyela omimi iji nye gị vidiyo vidiyo nke Jeremy Doku's Uto Ule site na iji FIFA 21 Career Mode. Na njedebe mkpali ahụ, ike ya toro site na 71 ruo ihe karịrị 91 - nke yiri Cristiano Ronaldo.
Eziokwu # 5 - Okpukpe Jeremy Doku:
Nke mbu, o nwere aha nwoke nke Akwụkwọ Nsọ nyere ya bụ nke dị iche na aha agba ochie Jeremaịa.
Ọzọkwa, aha nne ya 'Belinda' bụ aha nwa agbọghọ Onye Kraịst. Aha nna Jeremy 'David' bụ aha Akwụkwọ Nsọ. N'ikpeazụ, aha nwanne ya nwoke 'Jefferson' bụ aha nwata nwoke Onye Kraịst.
Site na itinye ya, Jeremy Doku mụrụ onye Kristian. N'ihi àgwà ya (dị ka akọwapụtara na Bio ya), anyị amaghị ọkwa nke ntinye nye okpukpe ndị Kraịst.
Ihe omuma banyere Jeremy Doku na-eme ka anyi akuziri anyi, na ezigbo ihe omumu nwata na-ekere oke na ichota odi nma. Ndị nne na nna Jeremy Doku (David na Belinda) zụlitere ụmụ ha n'ụlọ, ọ bụ naanị nkeji isii ka ọ gawara ọdụ egwuregwu ama ama Antwerp.
Ala bọọlụ Bosuilstadion (ụlọ nke Royal Antwerp) metụrụ nwata nke ọma. Ọ kpaliri nrọ bọọlụ Jeremy n'akụkụ nwanne ya nwoke nke okenye Jefferson.
Tupu e debit ya, ọha mmadụ amaghị Jeremy nke ọma. Taa, ọ naghị ebi nrọ ezinụlọ ya. Jeremy emeela Ghana (mba nne na nna ya) dị mpako.
Daalụ maka ịnọnyere anyị iji gụọ akụkọ ndụ nke onye na-agba ọsọ ọsọ ọsọ nke Belgium. Na Lifebogger, anyị ji obi anyị niile na-aga n'ihu ịnapụta gị akụkọ ndụ ndị Belgium na-agba ọsọ ụkwụ. N'ikwu nke a, ndị edemede anyị na-agba mbọ maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ.
Jiri obiọma kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ị hụrụ - naanị ihe ọ bụla - nke ahụ adịghị mma na akụkọ ndụ anyị nke Jeremy Doku.
Ma ọ bụghị ya, biko mee ka anyị mara echiche gị banyere onye egwuregwu bọọlụ 5 ụkwụ 7 sentimita na ngalaba nkọwa anyị. Maka nchịkọta ngwa ngwa nke ncheta Doku, jiri tebụl Wiki anyị.
Jeremy Doku Wiki Enyocha
Aha n'uju: Jeremy Doku
Ụbọchị ọmụmụ: 27 May 2002
Age: 19 afọ na ọnwa 4.
Ebe amụrụ onye: Obodo Antwerp, Belgium
Ndị nne na nna: Belinda Doku (nne) na nna, David Doku (Nna)
Ụmụnne: Jefferson Doku (Nwanne nwoke okenye) na ụmụnne nwanyị abụọ
Education: Anderlecht's Purple Talents na-abanye n'ụlọ akwụkwọ
elu: 1.71 m (5 ft 7 na)
Ndị na-egwu egwuregwu: Egwuregwu ICM
Ezigbo Net: 2 nde Euro (2021 stats)
Anọ m na-ele Jeremy Doku n'oge Euro 2020 niile, obi dịkwa m ụtọ ịbụ onye Ghana n'ihi Jeremy na ndị Ghana ndị ọzọ na-ahapụ mba ọzọ.
Jeremy nye m bụ onye kachasị egwu na egwuregwu Belgium, Italy. Ana m ekele Chukwu, na-ekpekwa ekpere maka gị na ezi na ụlọ DOKU niile, ma chukwu gozie gị niile.